Isu takaparura Geo-Injiniya - Iyo magazini - Geofumadas
Nekugutsikana kukuru tinoshambadza kuvhurwa kweGeo-engineering magazini, yenyika yeSpanish. Ichave iine quarterly periodicity, yakafumiswa dhijitari vhezheni yemultimedia zvemukati, kurodha pasi mu pdf uye yakadhindwa vhezheni mune huru zviitiko izvo zvakafukidzwa neayo protagonists.
Pane peji rayo repakati pane infographic inoratidza shanduko yemazwi GIS, CAD, BIM kuti mune yavo nhoroondo mupiro vanga vachikura kwete kwete chete maitiro ematanho mune manejimendi manejimendi uye zvakare akamiririra tambo yakafanana iri kutungamira kugadziriswazve kwemaitiro eanonzi «pasi sainzi», zvishoma nezvishoma. Iwo maratidziro mune infographic anotambanudzira kune iko kusanganiswa kweBIM + PLM muchimiro chechina yechimurenga chimisheni yezvazvino chakasimudzirwa nemazwi akadai seDhijitari Mapatya, SmartCities ane muono wekuti pachinzvimbo chekuita senge uri kure zvechokwadi uchauya tisingazvizive isu pamwe Zvakaitika muUber -Airbnb-maitiro maindasitiri.
Plex.Earth apo Lambros muchiSpanish rakashandurwa Laura García nyaya anotiudza pamusoro vakavhengana CAD-GIS zvinogadzirisa kubva kudiwa vehurumende mainjiniya nemaonero ake nhoroondo pachake:
Pakanga pasina chekuita: taifanira kudzokera zvakare basa rezvakanaka zvenzvimbo yacho, zvinopikisa kusvika kunenge yose yakasimwa. Takarasika kumativi ose mwedzi mina, asi nhamba isu kushamisika: mune chirongwa che 6 mamiriyoni yemadhora, redesign inodhura kudarika $ 600.000 ...
Ndiyo pandakatanga kuwedzera zvimwe zvishandiso "Yakananga" kuti ubatane neAccCAD ne Google Earth, iyo kwenguva yakati Yaiva yedu-yakavanzika - kukwikwidzana.
e-Cassini, ayo muvambi rinotiratidza muna bvunzurudzo pamwe Shimonti Paul, ari dzigare mairi mashoko kubva kwakaita nzvimbo yacho noitika Hub sezvo rimwe pfungwa chokwadi.
Dhiyabhorosi yeDIpoar is anozivikanwa nhasi kunyanya ne vashandisi, vane zvakawanda nguva yakawanda kubva pacho yehutano hwemaonero musinganyanyi kusimbiswa kubva kuna Pfungwa yekuona yehutano, kururama uye kunyatsoita. Asi zvakadaro Saka, matambudziko mazhinji anoitika maererano nemashoko ekutsanangura uye kukwana Kunyanya Kunyatsotsanangura iyo spaces, the larger the nhamba yevashandisi uye kuwedzera kukosha kune muenzaniso we bhizinesi
Ndaigara ndichiziva nezvekururama kwe iyo data yakapihwa neGoogle. Pakanga paine Zvimwe zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakushandisa zvandaive nazvo mupfungwa:
• Mafungiro / mazano ekutanga ezvitsvaIwe unoenda zvikamu zvishoma.
• Kuwana nzvimbo yekusika yebhaini kusvika kuongororwa kwemvura HEC-RAS 2
Chinyorwa chinonakidza chaNicolas Mangon, pamusoro pezvingave zvakabatana BIM zvinoshandiswa kune mamiriro eAEC.
Paunoratidzira kuti izvi zvinopindirana sei, mune chimwe nechimwe chechivakwa chekuvaka inovandudza kubudirira, kuchengeteka uye mari, Izvo hazvizovi kunyange mubvunzo wekuti iyo mhizha ichafamba mune izvi, asi nokukurumidza.
Muchikamu chechinyorwa ichi, magazini yacho inosanganisira nhau kubva kumakambani anotungamira mumashandi; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Kadaster, Hexagon uye Microsoft.
Previous Post«Previous Yakanakisisa yeBIM Summit 2019
Next Post Tekinoroji nhau muGeo-engineering - Chikumi 2019Next »